Dconf mupepeti: chishandiso chine simba kwazvo chinofanirwa kubatwa nehanya | Linux Vakapindwa muropa
Mune shanduro dzichangoburwa dze Ubuntu, mushure mekusiya Unity Shell uye shandura kushandisa iyo GNOME shell zvakananga, zvimwe zvinhu zvachinja. Kunyangwe kune vamwe vashandisi zvinoita kunge zvirinani, vamwe vakajaira Kubatana vacharasikirwa nezvinhu zvakawanda. Iwe unofanirwa kuziva kuti kunze kwemasethingi iwe aunogona kushandisa uchishandisa Zvirongwa, kune zvimwewo zvimwe zvakadzama zvinhu zvekugadzirisa zvimwe zveiyo graphical interface.
Kana iwe uchida kuita imwezve shanduko, iwe unogona kuve unofarira kunzwa nezve GNOME Tweak Chishandiso kana GNOME Tweaks. Unogona kuiisa nyore nyore kubva kuUbuntu Software Center pachezvayo. Uye kana yaiswa, iyo inokutendera iwe kuti uite shanduko dzakawanda kudesktop. Icho chimwe chinhu chine simba uye chakadzika kupfuura kumisikidzwa iyo inokutendera iwe kuti uchinje kubva kuZvirongwa.
Gadzira chitarisiko uye desktop.
Iwo ekutanga kunyorera.
Rongedza top bar.
Gadzira sarudzo dzemagetsi.
Asi kana izvo zvisina kukwana, saka chekupedzisira chishandiso chiri dconf-mupepeti, asi ine simba kwazvo zvekuti unofanirwa kuishandisa zvine hungwaru kana iwe usiri kuda kutyora system. Nayo unogona kuita shanduko zhinji muGNOME padanho rakadzika, kugadzirisa zvinhu zvisingaite nematurusi apfuura. Mune ino kesi, iwe unogona zvakare kuiisa nekuitsvaga muUbuntu Software Center kana kuburikidza neiyo terminal ...
Kamwe yaiswa, kana iwe ukaitsvaga pakati pemapurogiramu ako uye ukaivhura, uchaona kuti inoratidza madhairekitori mana: maapplication, ca, com, desktop, org, uye system. Kuti uzo kugadziriswa muGNOME, unofanira kupinda:
org: kwaunowana zvinhu zviri muchikamu chemifananidzo.
gnome: iko kurongedzerwa kwakamisikidzwa maererano nenzvimbo yeGNOME.
Shell: iyo yekumisidzana inoenderana neiyo graphical shell kana interface. Uye mukati iwe unogona kuenda chero kwaunoda.
Ndiri kuenda kuisa mimwe mienzaniso yekushandisa, asi iwe unogona kuita kuwanda kwezvinhu ...
Semuenzaniso, unogona kuchinja chitarisiko kana mhedzisiro yeDock kubvira:
org> gnome> shell> extensions> dash-ku-dock
Imwe sarudzo ndeiyi tsvaga zvakananga mubha yekutsvaga dconf "dash-to-dock" kuunza iyo yekupinda. Wobva waipa woenda mukati megadziriro yedoko. Ikoko iwe unogona, semuenzaniso, kumisa kana kumisa iyo animation, nezvimwe.
Mumwe muenzaniso ungave gonesa kuve pachena simba:
org> gnome> shell> extensions> dash-to-dock> pachena-modhi. Uye kubva ipapo shandura iko pachena kukosha.
Kana tsvaga zvakananga muinjini yekutsvaga "pachena-maitiro" pasina makotesheni.
Delete iyo marara icon kubva padhesiki:
org> gnome> nautilus> desktop> marara-icon-inoonekwa. Kubva ipapo, tinya switch kuti ibvise.
Kana tsvaga wakanangana ne "marara-icon-anoonekwa" mune dconf yekutsvaga injini kuti usave nekufamba ...
Kana iwe uchida wedzera kudzokorora bhaini kune yekutanga menyu seunofarira muUbuntu 19, unogona kuda izvi:
org> gnome> shell> extensions> show-marara. Wobva waichinja kuti uratidze.
Kana kuti tarisa zvakananga iyo "show-trash" yekupinda mu dconf browser.
Uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvandiri kukukoka iwe kuti ubvunze ...
Chenjera zvaunobata! Kana iwe usingazive zvauri kuita, zvirinani kuti usazviita ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Dconf mupepeti: chishandiso chine simba kwazvo chinofanirwa kubatwa nehanya
Zvinonakidza, zvisinei ini ndinofunga zvakaitika. Chinyorwa chakanaka, kwaziso.
Iyo marara gnome… .izvi zvinoita kunge regedit yeisina zita.
Nei heck achifanira kuve nepakati pekushandisa gadziriso sisitimu?
kuitira kuti vamwe vazive kuti waisa? kana kuvashandura kuti vave kure kure
kwechinguva chidiki wozovasiya sezvavaive?
Ndinotaura izvi nekuti ini ndinoona geolocation sarudzo yekugonesa ... ine nguva shoma yekurarama
kuita gnome kunyorera pane yangu linux.